Tips and Tricks – AutoMyanmar
အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် ကားဝယ်ယူရတာအရင်ကထက်ပိုပြီးလွယ်ကူလာသလို Auto Gear Transmission တွေဖြစ်လာတာကြောင့် ကားမောင်းတတ်ဖို့ကလည်း ပိုပြီးလွယ်ကူလာပါတယ်။ အဲ့လို ဝယ်ယူရလွယ်ကူ၊ မောင်းတတ်ဖို့လွယ်ကူစတဲ့အချက်တွေကြောင့် ကားပိုင်ရှင်တွေများပြားလာပေမယ့် ကားကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ့်အခြေခံအချက်တွေကိုတော့ မေ့ထားနေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ Automyanmar အနေနဲ့ မိတ်ဆွေအချို့မေ့နေတဲ့ ကားနဲ့သက်ဆိုင်ရာအခြေခံအချက်တွေထဲက ၅ ချက်ကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မောင်းသူတိုင်းစိတ်ထဲထည့်ထားသင့်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တာကြောင့် မိတ်ဆွေတို့ စိတ်ဝင်စားလောက်မှာပါ။ Car Engine Oil Engine Oil ဆိုတာ ကားတစ်စီးရဲ့ Fuel လောင်ကျွမ်းစေတဲ့နေရာမှာပဲအထောက်အကူပြုတယ်လို့ တော်တော်များများထင်ကြပေမယ့် အမှန်တော့ Fuel လောင်ကျွမ်းစေတဲ့နေရာမှာအပြင် အင်ဂျင်ကိုပိုပြီးချောမွေ့အောင်၊ ပိုပြီးအေးမျှအောင်နဲ့ ပိုပြီးသန့်ရှင်းအောင် အစရှိတဲ့နေရာမှာပါ အထောက်အကူပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုအထောက်အကူပြုတဲ့ Engine Oil ဟာမိမိရဲ့ ကားမှာမလုံလောက်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့ အပေါ်ကဖော်ပြခဲ့တာတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်တွေကို လုပ်ဆောင်တော့မှာပါ။ အဲ့တာကြောင့် မိတ်ဆွေအနေနဲ့ မိမိကားရဲ့ Engine Oil […]
အခု မိုးတွင်းလည်းရောက်နေပြီဆိုတော့ ကားမောင်းရတာ ခြောက်သွေ့တဲ့ နွေရာသီနဲ့ ဆောင်းရာသီထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေမှာဖြစ်သလို အန္တရာယ်လည်း အနည်းငယ်ပိုရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လို အခက်တွေမဖြစ်ရအောင်နဲ့ အန္တရာယ်တွေကို ကြိုတင်ကာကွယ်ပြီး မောင်းနှင်နိုင်အောင် Automyanmar က ရိုးရှင်းပြီး အကျိုးရှိစေမယ့်နည်းလမ်း (၅) မျိုးကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ (အချိန်ကိုက်ပါပဲနော် ?).. စပါပြီ။ ၁. ဖြည်းဖြည်းမောင်းပါ ဒီအချက်ကတော့ အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပေမယ့် လူကြီးတွေပြောနေတာတွေ၊ ကြော်ငြာတွေမှာ ခဏခဏမြင်နေ/ကြားနေရတဲ့အချက်ဖြစ်တာကြောင့် တော်တော်များများက မေ့နေ (သို့) ဂရုမစိုက်မိ တဲ့အချက်ပါ။ ပုံမှန်ခြောက်သွေ့တဲ့ရာသီမှာ ဆိုရင် ကားကိုအရှိန်မြန်မြန်နဲ့မောင်းရင် ဘရိတ်ကိုပြန်ထိန်းချုပ်ဖို့က လွယ်ကူပေမယ့် စိုစွတ်တဲ့မိုးရာသီမှာတော့ ဘရိတ်ကိုပြန်ထိန်းဖို့က ပုံမှန်ထက်အနည်းငယ်ကြာနေတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် မိုးရေထဲမှာကားမောင်းမယ်ဆိုရင် သူများတွေဘယ်လို အရှိန်နှုန်းနဲ့မောင်းနေတာကို ဂရုမစိုက်ပဲ ကိုယ့်ရဲ့ကားအရှိန်ကို တတ်နိုင်သမျှနည်းအောင်ထားပြီးမောင်းနှင်ပါလို့ဆိုချင်ပါတယ်။ ၂. ကားကိုအလယ်လမ်းကနေမောင်းပါ မိုးရေထဲမှာ မိတ်ဆွေကားကို တည်နေရာယူတဲ့အခါ […]
အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့မောင်းနှင်သူဖြစ်အောင်ကူညီပေးမယ့် နည်းလမ်း (၅) မျိုး
ကားမောင်းနည်းကိုသင်ပေးခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေရဲ့ လက်ဉီးဆရာဘယ်သူလဲဗျ… အဖေ (သို့) သင်တန်းကဆရာလား ?… အဖေဆိုရင်တော့ သေချာပါတယ်၊ တော်တော်လေးအပွားခံခဲ့ရမှာ ?) ဒီနေ့ Automyanmar ကတော့ မိတ်ဆွေကို အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့မောင်းနှင်သူဖြစ်အောင် ကူညီပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၅ မျိုးကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ ဖော်ပြသွားမယ့် Tips လေးတွေဟာ အခုမှစပြီး ကားမောင်းမယ့်သူတွေအတွက်ရော၊ အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားလူတွေအတွက်ရော အကျိုးရှိမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ၁. ဘရိတ်အတွက် ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကိုအသုံးပြုပါ ဒီအချက်က လေ့ကျင့်မှုအလုံအလောက်မရှိတဲ့မောင်းသူဆိုရင် ဘရိတ် နဲ့ Accelerator pedal ကိုမှားနှင်းမိနိုင်တာကြောင့် အနည်းငယ်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီအချက်က ကားမောင်းသင်နေတဲ့လူတွေ၊ လက်ရှိ မောင်းနှင်သူတွေအနေနဲ့ မကြိုက်နှစ်သက်ကျတဲ့ အချက်တစ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိတ်ဆွေဟာ ဘယ်ဘက်ခြေနဲ့ ဘရိတ်နင်းပြီး ညာခြေနဲ့ Accelerator pedal နင်းမောင်းနည်း […]